Samachar Batika || News from Nepal » राति सुत्दा ऐठन हुन्छ ? त्यसो हो भने सिरानीमुनी राख्नुहोस् यी चीजहरु
राति सुत्दा ऐठन हुन्छ ? त्यसो हो भने सिरानीमुनी राख्नुहोस् यी चीजहरु
बिहीबार माघ १५
पोखरा – प्रायजसो सबै मानिसलाई सुत्दा ऐठान भएर न’राम्रो,ड’र लाग्दो सपना देख्ने समस्या हुन्छ । ऐठान हुँदा न’राम्रो सपना देखिने सम्भावना पनि हुन्छ । यस्तो समस्या धेरै जनालाई भईरहेको छ । सुतेपछि सपना देखेर ऐठान गर्ने हुँदा रातभर निन्द्रा पनि लाग्दैन र जीउ हल्का का’प्ने पनि गर्छ । यस्तो समस्या भएकाहरुलाई बिभिन्न प्रकारका पनि देखिन्छ ।
शास्त्रका अनुसार यस्तो समस्या भएकाहरुलाई उपाय पनि छ ।यदि तपाइले राती सुत्ने बेलामा ६ वटा सुकमेललाई कपडामा बेरेर सिरानीमा राख्नु भएमा डरलाग्दो सपना देखिदैन । त्यस्तै राती सुत्दा पहेँलो चामलको दाना सिरानीमुनी राखेर सुत्नुहोस् ।यसो गर्दा पनी धेरै कम हुन्छ आफु सुत्नु अगाडी सधै ओछ्यानलाई राम्रोसँग सफा गरेर मात्र सुत्ने गर्नुहोस् ।
त्यस्तै ड’रलाग्दो सपना देख्नुहुन्छ भने सिरानीमुनी च’क्कु तथा धा’रीलो वस्तु नङकटर, कै’ची राखेर सुत्नु गर्नुहोस अनी सुत्ने कपाल छोडेर पनी सुत्नने बानी नगर्नुहोस सट्टामा कपाललाई बाँधेर सुत्ने गर्नुहोस् । सुत्ने ओछ्यानमा जुत्ता चप्पलको प्रयोग नगर्नुहोस् ।
ओढ्ने कपडामा ड’र’लाग्दा जनावर भएको तस्वीर छ भने त्यो नओड्नुहोस् । पानीले भरिएको अम्खरा ओछ्यानमा राख्नुहोस् र बरु सम्भव छ भने त्यसलाई विहान विरुवामा हालिदिनुहोस् । यसो गरेमा राती डरलाग्दो सपना देख्नबाट छुटकारा पाउनुहुनेछ ।
प्रकाशित मिति ९ माघ २०७६, बिहीबार १५:०४